Mandritra ny fotoan-tsarotra amin'ny vanim-potoana COVID-19, inona no azontsika atao hiarovana ny tenantsika sy ireo olon-tiantsika? Afa-tsy mitafy sarontava tarehy rehefa mivoaka & manasa tanana matetika, manaova fanatanjahan-tena bebe kokoa ary manatsara ny hery fiarovantsika dia safidy tsara hafa. Na izany aza, voafetra ny toerana sy ny fitaovana fampitaovana ...
Miady amin'ireo gadon-tsarimihetsika PVC malemy
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-02-15
Softchain keychain dia iray amin'ny fanomezana malaza indrindra hampiroborobo ny orinasanao, ny fandaminana na ny hetsika. Mety hanontany tena ianao hoe hafiriana haingana ny keychain kely malefaka PVC manaparitaka ny varotra, rehefa apetraky ny olona eo amin'ny poketrany, poketra, lakileny, fiara, kitapo, findain'izy ireo ...
Karazan-tsokosoko sarontava isan-karazany, azo antoka kokoa sy ahazoana aina kokoa
Ny sarontava tarehy dia nanjary filàna isan'andro isan'andro tamin'ny taona 2020, ary ny COVID-19 dia feno fankasitrahana noho ireo zavatra vao hitany. Raha Regina Georges ny sarontava ho an'ny akanjo isan'andro, dia ho lasa Gretchen Wienerses sy Karen Smiths an'ny Coronavirus Preventio ny sarontava maska ​​...
Saron-tava tarehy amin'ny vidiny ambany
Ny sarontava tarehy dia ampahany amin'ny andavanandrom-piainantsika isan'andro, te hiaro ny tenanao sy ireo olon-tianao ary mamorona saron-tarehy tarehy mba hanao fanambarana lamaody, miovaova ny fomba fanaonao isan'andro? Faly ny milaza fa tonga amin'ny mpamatsy mety afaka mamorona sarontava tarehy ianao ...
Fantsom-pamokarana tsy miankina amin'ny lozisialy tsy misy fampiasa sy jiro famonoana UV
Moa ve ianao efa sahirana tamin'ny fitazonana ny fahadiovana sy ny fahasalamana, indrindra amin'ny COVID -19? Ny entanay vaovao dia afaka manampy amin'ny famahana ny piozila. Misy karazana entana isan-karazany hiadiana amin'ny coronavirus. Izahay dia hanome ny boaty famonoana / famonoana desinfection tsy misy fampiasa maro & UV disinfectio ...
Ny saron-tava fehiloha sy rojo no tarehy ilainao
Ny fanaovana sarontava tarehy dia eo amin'ny lisitry ny zavatra ilaina isan'andro amin'ny fiainantsika mandritra ny volana maro na taona maro ho avy, izany hoe ny fanasana sy ny fitazonana ny saron-tava an'ny tsirairay dia mety ho raharaha be, ary tsy misy te ho very ny saron-tava satria izy ireo nandatsaka azy teny am-pandrosoana. Faly izahay fa ao ...
Takelaka akrilika ho an'ny fandosirana ara-tsosialy
Manana fiarovana ampy ve ianao mba hiarovana ny mpianatrao, ny mpiasa ary ny mpanjifanao? COVID-19 dia nanova ny endrik'izao tontolo izao. Manoro hevitra ny olona tsy tokony hifampiresaka ny manampahaizana manokana momba ny areti-mifindra raha tokony hiara-misakafo any ivelany izy ireo. Manantena ny orinasa fa hametraka fizarazarana dia hampihena ny ...
Tompon-tanana fanadiovana tanana
Ny areti-mandoza mitohy dia nahatonga ny mpanadio sy ny mpanadio ary ny fanadiovana ho zava-dehibe satria ny mpanjifa dia miezaka ny manao izay fara heriny hamakivakiana ny ara-dalàna vaovao ary hijanona ho azo antoka, ka ny tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana dia natao hanampy azy hanao izany mialoha mba hitazomana azy ireo. Ny fitazonana ny tanana madio dia zava-dehibe kokoa noho ny teo aloha, indrisy, ...
Keychain mpanokatra vy maro karazana
Faly mampahafantatra ny vokatra amidy be indrindra: lakile vy metaly maro tanjona izay azo entina isan'andro sy miaro ny fahasalamantsika. Izany dia tsy vitan'ny fanokafana varavarana mikasika, mora ny manindry ny bokotra ascenseur, misintona ny fantsom-baravarana sy ny vavahady misokatra, varavarana misokatra tsy misy conta ara-batana ...
Tanan-tanana Silitary Sanitizer
Ny fanadiovana ny tanana dia fitaovana fidiovana lehibe iray raha mbola matanjaka sy manaparitaka ny areti-mandringana. Tsy maintsy nodinihintsika izay rehetra hainay momba ny fiarovana ny fiarovana sy ny fahasalamana, toy ny fanasan-tanana matetika, ny fahadiovana ary ny fanadiovana ny tanana, izay tena marina ho an'ireo olona izay ...
Manolotra vokatra fisorohana aretina izahay
Ny fanomezana SJJ dia tsy manome mpiambina sarontava tarehy, bandana, mpanadio tanana, taratasy savony fotsiny, fa manome karazana vokatra fisorohana aretina hafa koa. Na inona na inona tadiavinao ho an'ny fantsom-boaloboka fanoherana silika, baolina yoga, tsihy yoga, fehin-kiho manohitra ny fofonaina manampy anao ...
SABOTSY FABRIKA amin'ny vidiny mivantana FACTORY
Noho ny tsy fahampian'ny sarontava amin'ny tarehy, dia tsara kokoa ny saron-tava toy izay tsy misaron-tava manampy hampiadana ny fihanaky ny coronavirus, ary ny fisafidianana saron-tava lamba dia vahaolana lehibe. Ny fanomezana tsara tarehy mamirapiratra dia manolotra saron-tava tarehy vita amin'ny lamba amin'ny vidiny mivantana sy fotoana fandefasana haingana, miaraka amin'ny ...